Kanjani ukugubha uSuku ihhovisi lomshushisi
Njalo ngonyaka ngo-January 12 eRussia kumaka Suku ehhovisi lomshushisi. Isinqumo ku ukusungulwa kuleli dili kwavunyelwana ngoDisemba 1995.
Kukhethwa wawa ngalolu suku ngoba 1722 Tsar uPeter Omkhulu ngaphambilini Attorney General ukusungula uthumele Uhulumeni iSigele, lapho wamiswa ngo-January 12 Yaguzhinskii PI Kodwa ukuze kuhlonishwe lo mcimbi, futhi kwanqunywa ukugubha uSuku ihhovisi lomshushisi ngaleyo nombolo.
uhlelo State ukuhambisana neziphathimandla asimeme ekuqondeni wobuntu emithethweni enkantolo yobulungisa. Ngakho-ke, umfanekiso weNkosi Themis cishe njalo kuhlobisa courthouses, izikole umthetho, amanyuvesi, ihhovisi lomshushisi noma isikwele phambi kwabo. umenshonnye amakhophi alo etholakala emahhovisi abasebenzi kule mboni. Ngokuvamile njengesipho nabantu abangqondo umsebenzi ixhunyiwe nomthetho, owethulwe statuette ka Themis.
Ukuqopha ngokuvamile ubulungiswa unkulunkulukazi ukuboniswa ezazivalwe amehlo, kodwa Okugweda banamuhla bakholelwa ukuthi ihhovisi lomshushisi kufanele sekuqhamuke. Okungukuthi, kufanele sikwazi ukwenza izinqumo eziphusile, enesisindo hhayi kuphela amaqiniso angempela, kodwa futhi izici zokuziphatha, abantu nezenzo ezingokomoya nesisusa. Ngamanye amazwi, laba bantu ubona akufanele kuphela emehlweni nengqondo, kodwa futhi inhliziyo. Ngakho-ke, ku yangasese University of Tokyo Chuo University baziwa umhlaba wonke esikoleni yayo komthetho, kuyafaneleka Themis nje enhle kangaka ngaphandle kuso.
Emhlanganweni yesivumelwano iholide zochwepheshe abashushisi liphuma umlando ekwakhekeni, amagula avelele main, ukukhumbula nabantu abavelele ezifana Andrey Yanuarevich Vyshinsky, Roman Andreevich Rudenko. Futhi zokugcina ngingena inkumbulo yomuntu, ngaphezu kwakho konke, sibonga iqhaza yayo le eNuremberg nokulingwa. Wasekela kushushiswa amakhanda kombuso kaHitler ukuphuma ngaphansi kweSoviet Union.
Ngokuvamile, Suku ihhovisi lomshushisi umhlangano onesizotha. Bezwa siyakuhalalisela kukhona impumelelo imakwe, imiklomelo abasebenzi umhlabeleli kulo mkhakha. Sakaza ku-imibukiso zethelevishini namabhayisikobho ngezihloko ezifanele.
Futhi, ngokuvamile kakhulu emaphathini yenkampani noma imibuthano samaholide siyakuhalalisela umsindo ku ihhovisi lomshushisi evesini. Baphawula ukubaluleka nokuba yinkimbinkimbi lo msebenzi, umthwalo wemfanelo omkhulu kwalezi zisebenzi. Phela, kusukela isinqumo lomshushisi kuncike isiphetho ngabantu.
Tinkondlo ngoSuku umshushisi sika
Ngakho ngezinye izikhathi kunzima ukuthatha isinqumo sokuthwala
Yokudumisa, hhayi aphanjaniswe,
umphefumulo Innocent ukuba aphule,
Phela, igama elithi - kuba like inyoni,
Uma bakhishwe, Angazi ukubuyela emuva.
Iphutha! NoSathane ungathandi ngempela umfowabo
Igama elithi zesicelo kunzima kakhulu!
Futhi namhlanje sonke abashushisi
siyakuhalalisela yethu eqotho!
izinhliziyo zenu zigcwele isibindi!
Wena zashaya ufisa:
Isibindi sokufakaza kuze kube sekupheleni,
Lokho umphefumulo awuyona angabi naluzwela.
Inhliziyo igazi ingalandela ugibele ngaphakathi,
Ingqondo ozonquma umphumela icala.
Yiqiniso, ngesikhathi kulungiselelwa amaholide yebhizinisi kufanele cabanga ngaleya ndaba lomcimbi. Asikho isidingo zenza konke kube edilini evamile futhi ubhontshisi. Ngokwesibonelo, kuhle ukudlula party, uma sithatha izinganekwane isiGreki okuholela bagqoke up in izevatho onkulunkulu Olympus.
Kuyafaneleka ukubamba "inkantolo" yamahlaya on abasebenzi, lapho umshushisi uyokhuluma ezihlekisayo inkulumo kuyindida, futhi izinqumo kungenzeka lezi: "Ngakho-ke umsolwa uyavuma wecala, futhi inikezwa umusho okunemibandela (ngokuthi isikhathi esisele kuze kuba uthatha umhlalaphansi) ukukhonzwa ku (igama eliphelele) . Uphinde wagwetshelwa esimisiwe umsebenzi zokulungisa e (igama lendawo lapho ivawusha ikhishwa bangabeki) nge ukuvakashelwa saziso nsuku zonke ukuze ebhishi, izenzakalo kusihlwa ukuzijabulisa, umdanso. Ukudlala nge ubuhle abasha, uhlezi lapho, wamukelekile! "
Fun emcimbini labetibambile emncintiswaneni "Guess inganekwane." Ngesikhathi enjalo inganekwane owaziwa Ixoxwa indaba legalese. Ngokwesibonelo, inganekwane "The Wolf kanye Kids Little Seven" ongakusho lokhu: "Lowo ocasule uphula ehlasela abantu abasha eziyisikhombisa. unina izisulu iphethe lynching, okuholela kulondolozwa izingane zabo, futhi protagonist uyafa. "
Kubalulekile ukuzama ukwenza fun iholidi futhi umcimbi ongasoze bonke abahlanganyeli waya ekhaya nge ajabule futhi ukuziqinisa nokuba nombono.
Kanjani ukukhetha ezanele ukubingelela nozakwethu
Njengoba silungiselela Easter? izandla zakhe enze izinto eziyizikhumbuzo
International Bird Day - April 1st. Izinsuku International Bird Watching
Kuyini karma? karma ukuhlola: theory kanye umkhuba
Isifundo ebusika: indlela eluka anyanisi e eluka
Amazambane ukhilimu omuncu: nge amakhowe, hhayi nje
Careprost: imfundo ngesiRashiya, ukubuyekezwa
SSIs System "ukubala": uxhumano namathuba
Japanese Quince jam - uju elula
Kanjani ukuba babhale indaba mayelana isiRashiya: izincomo emfushane
Chin: plastic, izithombe ngaphambi nangemva
Ukondla ingane at izinyanga 7. Ngenisa okusanhlamvu ukudla amaprotheni